ထိပ်တန်း 10 iPhone ကိုကာစီနိုဂိမ်း - အကောင်းဆုံးက iPhone အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံ - အွန်လိုင်းကာစီနိုအပိုဆုကုဒ်များ
ထိပ်တန်း 10 iPhone ကိုကာစီနိုဂိမ်း - အကောင်းဆုံးက iPhone အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံ
(550 ပျမ်းမျှအားမဲ: 5.00 )5ထဲက
Loading ... ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခမ်းနား top10 iPhone ကိုကာစီနိုများစာရင်းမှာကြည့်ယူပါ။ ဤစာရင်းတွင်သငျသညျသငျတို့ရှေ့ကိုမြည်းစမ်းဖူးပါဘူးကြောင့် iPhone ကိုလောင်းကစားရုံအတွေ့အကြုံကိုမြည်းစမ်းဖို့အတှကျအကောငျးဆုံးအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျ Las Vegas မှာသွားရောက်ကြည့်ရှုမနိုင်လျှင်, ဒီလာမယ့်အကောင်းဆုံးအရာပါပဲ။ မိုဘိုင်းလောင်းကစားရုံကစားရန်ပိုကောင်းတဲ့အချိန်ရှိခဲ့သည်ဘယ်တော့မှသိရသည်။
အလွန်ပထမဦးဆုံး Apple ကဖုန်းကိုလောင်းကစားရုံစျေးကွက်ထိမှန်ကတည်းကကျနော်တို့က iPhone လောင်းကစားရုံ apps များ rating ခဲ့ကြရတယ်။ ကျနော်တို့ပိုကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာကောင်းပါတယ်အရာကိုသိ, သင်ရုံလွင်ပြင်ကိုရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်အဘယျသို့။ ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူကပ်သင်ပူဇော်ကြောင်း iPhone ကိုလောင်းကစားရုံက်ဘ်ဆိုက်များကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်:
1. လောင်းကစားဂိမ်းများ, slot နှစ်ခုနှင့် app များကိုများ၏အကျယ်ဆုံးအကွာအဝေး
ထိပ်တန်း 10 Iphone ကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း
Apple က - ကက၎င်း၏တန်ခိုးကြီးသောဖန်ဆင်းရှင်အားဖြင့်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်ကတည်းက iPhone နှင့် iPhone ကိုကာစီနိုထက်နည်းငါးနှစ်အတွင်းလောင်းကစားဝိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ထူးခြားတဲ့အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည်။ သင်တစ်ဦး iPhone, iPad အသုံးပြုသူဆိုရင်ဟုတ်တယ်, သငျသညျယခုသွားလာရင်းမိုဘိုင်းလောင်းကစားရုံရူးသွပ်မှုအတွက်ပျော်မွေ့နိုင်ကြသည်။ တစ်မူထူးခြားတဲ့မာလ်တီမီဒီယာစမတ်ဖုန်းကို device ကိုအဖြစ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ, iPhone, ကသင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးအိမ်မှာကွန်ပျူတာပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲ့သို့တူညီသောအဆင့်မှာမမေ့နိုင်သောလောင်းကစားရုံဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံကိုရာပူဇော်သက္ကာကို, အလုအယက်ကိုးကှယျ "သင်များမှာအစဉ်အဆက်အဘယ်မှာ" သူအပေါငျးတို့အကြား hit တစ်ချက်ချင်းကဲ့သို့မိမိကိုမိမိတည်ထောင်ခဲ့သည်။
ယနေ့အားလုံးလောင်းကစားရုံ၎င်းတို့၏ iPhone ကိုဂိမ်းကမ်းလှမ်းမှုကိုရှိသည်။ သူတို့ဟောင်းတစ်ဦးလေးစားသူမြားသို့မဟုတ်သင်တန်းသားအဖွစျဖျောပွနိုငျသောသူမြားမှန်လျှင်အဘယ်သူမျှမကိစ္စ။ သဘာဝကျကျ, သီးသန့်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေများနှင့်ပရိုမိုးရှင်းထွက်အဲဒီမှာအားလုံး iPhone ကိုအထင်ကြီးလေးစားဘို့အရရှိနိုင်ပါသည်။ အားလုံးလောင်းကစားရုံ, အထူးသဖြင့်ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့သူမြားကိုနှစ်ပေါင်းမိုဘိုင်းလောင်းကစားရုံကစားသမားမှကြီးမားသောပမာဏကိုပေးဆောင်ပြီ။ ရုံက iPhone ကိုလောင်းကစားရုံ "လှိုင်း" ကဲ့သို့အရသာတံ့သောအရာကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ရုံ sign up ကိုများနှင့်ပထမဦးဆုံးကိန်းဂဏန်းဟာမင်းအတွက်ပါပဲ။ နှောင်ကြိုးမဲ့။ အစစ်အမှန်ပိုက်ဆံအဘို့သင့်အကြိုက်ဆုံးမိုဘိုင်းလောင်းကစားရုံဂိမ်း Play ။ သို့မဟုတ်ကစားပိုက်ဆံ option ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ပျော်စရာရှိသည်။
သင်က iPhone လောင်းကစားရုံရူးသွပ်မှုသို့ခြေလှမ်းရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ညာဘက်ရာအရပျ၌ရှိကြ၏။ အဘယ်အရာကိုမျှ iPhone ကိုလောင်းကစားရုံဂိမ်း beats ။ ကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်ပါတယ်။ သင်အလိုရှိနေရာတိုင်းမှာသင်ချင်တယ်အခါတိုင်း။ ဤအ iPhone ကိုကာစီနိုလောင်းကစားရုံအတော်များများဟာအမေရိကန်ကောင်းသောသတင်းဖြစ်သည့်ကစားသမားများ, လက်ခံပါ။
အွန်လိုင်းကာစီနိုဂိမ်း - iPhone ကိုလမ်းသို့ပို့ဆောင်
ယနေ့ကောင်းသောအစစ်အမှန်ပိုက်ဆံအွန်လိုင်းမိုဘိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံအစဉ်အဆက်ထက် ပို. လူကြိုက်များကြသည်။ စမတ်ဖုန်းခရီးဆောင်ပစ္စည်းတွေပိုကြီးပြီးပိုအစွမ်းထက်ဖြစ်လာ, ဒါကြောင့်သူတို့ကိုသင်အပေါ်ဥပမာ iPhone ကို slot နှစ်ခုကစားနိုင်ပါတယ်ထိပ်တန်းလောင်းကစားဂိမ်းများကို၏အကွာအဝေးအဖြစ်လွန်းတိုးတက်ပါပြီ။
iPhone ကိုအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံ applications များလူကြိုက်များလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ရရှိမှုနေကြတယ်, သင်ထားတဲ့ Apple ကစမတ်ဖုန်းပိုင်ရှင်ဆိုရင်ဆဲလ်တက်မီးနှင့်ကင်လုပ်ခိုင်း, ကစားတဲ့, ဗီဒီယိုဖဲချပ်ဝေ, Baccarat, slot နှစ်ခုသို့မဟုတ် Blackjack ကစားခြင်းကိုစတင်ပိုကောင်းတဲ့အချိန်ရှိခဲ့ဘယ်တော့မှရဲ့။
လိုပဲကျွန်တော်တို့ဟာပိုမိုလွယ်ကူဖြစ်နိုင်ဘူး, ထိုသို့ပင်အစားသင်ကသင့်ရဲ့ browser တွင်တိုက်ရိုက်ကစားရန်ခွင့်ပြုတဲ့အရာကို download လုပ်ပါရန်သင့်မလိုအပ်ပေမည်အနေနဲ့ iPhone ကိုအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံအပေါ်အမှန်တကယ်ငွေကစားရန်အစကပြောသည်။
ရွေးချယ်မှုသင်၏အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံတစ်ခု app ကို download (သို့မဟုတ်သင်ရုံကြောင်းလမ်းကစားရန်ပိုနှစ်သက်) ကိုသငျသညျလိုအပ်ပါတယ်လျှင်သင်တို့သည်ငါတို့၏ခြေလှမ်း-by-step လမ်းညွှန်ထဲမှာမြင်ရပါလိမ့်မယ်အဖြစ်သို့သော်ဒါကြောင့်လုပ်နေတာ, မယုံနိုင်လောက်အောင်လွယ်ကူသောဖြစ်ပါသည်:
1. သင့်ရဲ့ iPhone ပေါ်မှာ App Store မှာကိုသွားပါ
2. နာမတော်ဖြင့် '' အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံ 'သို့မဟုတ်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံရှာရန်
3. သင်လိုချင်တဲ့တဦးတည်းကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာထို့နောက် '' Install '' Get '' ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
app ကို downloads, တစ်ချိန်ကစက္ကန့်အနည်းငယ်မှာတော့ပွင့်လင်းဖွင့်ဖို့ (သို့မဟုတ်ပါကအလိုအလျှောက်ငှါ) ကိုကလစ်နှိပ်ပါ
4. ပြီးတာနဲ့ app ကိုအတွင်းပိုင်း, အွန်လိုင်းမှလောင်းကစားရုံအကောင့်တက်သည်လက်မှတ်ထိုးဘို့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာ (သို့မဟုတ်သင်တို့ရှေ့မှကြောင်းဆိုက်နှင့်ကစားခဲ့ပြီးပြီဆိုပါကသင့်ရဲ့လက်ရှိတဦးတည်းကိုအသုံးပြုဖို့)
5. သင့်ရဲ့ iPhone ပေါ်မှာအမှန်တကယ်ငွေအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံဂိမ်းကစားခြင်း Start! (သင်ဆန္ဒရှိလျှင်သို့မဟုတ်, ပထမဦးဆုံးအခမဲ့ကစား mode ကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချ)
သင်တစ်ဦးထိပ်တန်းအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံရှာနေလြှငျ, iPhone ကိုရှေးခယျြစရာဝေးနှင့်ကျယ်ပြန့်ဆန့်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာမျက်နှာများနှင့်သင့်ဖုန်းတွင်ကစားရန်ထိပ်တန်းသောအရပ်တို့ကိုမထုတ်စစ်ဆေးပါ။ မိနစ်သင်အနည်းငယ်ဘုံဘိုင်အတွက်စားပွဲ hit နိုင်အောင်ပဲသင့်ရဲ့ iPhone ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်တယ်ကြောင်း site တစ်ခုမှာကစားပါလိမ့်မယ် - အဘယ်သူမျှမ Set-up လိုအပ်သည်။
သငျသညျထို "App ကို" အတှေ့အကွုံထပ်ဖွချင်လျှင်, အရုံထဲကညာဘက်-facing မြှား Poke နဲ့နည်းနည်းစတုဂံထိပုတ်ပါ။ ထို့နောက်ပင်မစာမျက်နှာသို့ထည့်ရန်နှင့်အိုင်ကွန်နာမည်တစ်ခုပေးကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ကိုယ့်အလွန်ကိုယ်ပိုင်လောင်းကစားရုံကို iPhone အွန်လိုင်း app ကိုရှိခြင်းနဲ့တူ - သငျကို click ပြီးတာနဲ့ icon တစ်ခုသင့်ရဲ့ home screen ကိုထည့်သွင်းပါလိမ့်မည်, ထည့်ပါ။
ပွဲတစ်ပွဲအွန်လိုင်း iPhone ကိုကာစီနိုလောင်းကစားရုံ apps များနှင့်ဂိမ်းများဆော့ကစားဖို့အကောင်းဆုံးအကြောင်းပြချက်သင်ပြောင်းရွှေ့ပေါ်မှာကစားနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုထုတ် Get သို့မဟုတ်ကစားတဲ့အနည်းငယ်လှည့်ခြင်းများအတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့လေ့ကျင့်, iPhone ကို slot နှစ်ခုဂိမ်းများကိုအနည်းငယ်အစစ်အမှန်ပိုက်ဆံအဘို့အညအချိန်တွင်တီဗီများ၏ရှေ့မှောက်၌ကစားသို့မဟုတ် iPhone ကိုဖဲချပ်ဝေအချိန်မရွေးအနည်းငယ်လက်အားများအတွက်ဝမ်းနည်းနှိပ်ပါ။ ကိုယ့်အပေါ် log နှင့် play - ကိုသတိရပါ, ပထမကို download လုပ်ပါရန်မ clients များရှိပါသည်။ အဆိုပါ iPhone အသစ်5အစဉ်အဆက်ထက်ပိုပြီးအစွမ်းထက်သည်နှင့်သင်အကြီးအဂရပ်ဖစ်များနှင့် slick ကာတွန်းပျော်မွေ့နိုင်အောင်ပင်အရှိဆုံးအဆင့်မြင့်အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံက iPhone app များကိုကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။
အိုင်ဖုန်းအသေးစားများမှာ - တစ်ဦးပြဿနာဒါကလား?
အမှန်တကယ်ငွေအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံကို iPhone apps များပေါ်တွင်ကစားအဆင်ပြေပြေနဲ့လုံခြုံဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ iPhone ကိုကာစီနိုလောင်းကစားရုံမှာကစားမယ်ဆိုရင် - - သင်မရှိနှေးကွေးနေသေးတယ် software ကိုဖွင့်လျက်, ပြောင်းရွှေ့ပေါ်မှာကစားနိုင်ပါတယ်လုံခြုံ။
သို့သော်စမတ်ဖုန်းပေါ်မှာကစားအမြဲတချို့အားနည်းချက်တွေရှိပါလိမ့်မယ်။ အသစ်ကအိုင်ဖုန်း၏တန်ခိုးနေသော်လည်းသင်တို့ကိုအဘယ်သူမျှမ download, iPhone, အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံပေါ်ဂရပ်ဖစ်နှင့်ယေဘုယျချောမွေ့သင်သည်သင်၏ Mac အတွက်သို့မဟုတ် PC Desktop ပေါ်မှာစက်ပေါ်ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးကြီးမားကျယ်ပြတစ်ဦးအဖြစ်အတူတူအလေးချိန်ကိုသယ်ဆောင်မပြုစေခြင်းငှါရှာတွေ့လိမ့်မည်။
သင်တစ်ဦးကိုမှန်ကန်ပိုက်ဆံလောင်းကစားဝိုင်းက်ဘ်ဆိုက်ဖို့အသုံးပြုပါတယ်လျှင်အင်တာနက် slot ကသို့မဟုတ်ကစားတဲ့ဘီးမှာ squinting လူတိုင်းအတွက်မကျမည်အကြောင်းသင်၏အ 30 "desktop ပေါ်မှာ Monitor ပေါ်မှာထွက်ကစားခဲ့ပါတယ်။
အွန်လိုင်းက iPhone လောင်းကစားရုံဂိမ်းဖြစ်စေ, အဖြစ်ကျယ်ပြန့်နေတဲ့အကွာအဝေးရှိသည်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်သင်၏အွန်လိုင်းလောင်းကစားအတွေ့အကြုံသည်အခြားရှုထောင့်အတူတူပင်ဖြစ်သင့်သည်။ ကသတငျးကောငျးသျော, မိုဘိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံကို USA, ကနေဒါနှင့်သြစတြေးလျ၌တရားယခုကြီးမားဖြစ်ပါတယ်နှင့်အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံ iPhone ကိုရှေးခယျြစရာပဲကြီးထွားခြင်းနှင့်ကြီးထွားသွားနေကြသည်။ ယခုသင်ရရှိနိုင်မ download, ရွေးချယ်မှုများပျော်မွေ့။
ကျနော်တို့အကောင်းဆုံး iPhone ကိုကာစီနိုတွေ့ပြီးပြီ
အကောင်းဆုံး iPhone ကိုကာစီနို
အစစ်အမှန်ပိုက်ဆံအွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံ '' iPhone ကိုဂိမ်းတစ်ခုက Mac သို့မဟုတ် PC များအတွက်တစ်ဦးအဖြစ်အဖြစ်ကောင်းသောမဖြစ်သင့်အဘယ်ကြောင့်အဘယ်သူမျှမအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။ သို့သော်စမတ်ဖုန်းများနှင့်ရိုးရာ desktop ပေါ်မှာဆော့ဖျဝဲအကြားအရည်အသွေးကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်။ ကံကောင်းတာက, ငါတို့သည်သင်တို့ကို iPhone ပိုင်ရှင်တွေအပေါ်သူတို့ရဲ့နှိပ်လက်ချောင်းများချနိုင်ကြောင်းအွန်လိုင်းအကောင်းဆုံးလောင်းကစားရုံကိုကူညီရှာဖွေပေးဖို့ကဒီမှာပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ဘယ်လောက်ရှိသလဲနှင့်သင်ချက်ချင်းထိပ်တန်းသဘောတူညီမှုကိုရှာဖွေနိုင်အောင် iPhone ကိုအသုံးပြုသူများအဘို့ကြီးသော apps များနှင့် slot နှစ်ခုဂိမ်းများကိုနှိုငျးယှဉျ။ ထိုအစာမကျြနှာပျေါတှငျလင့်များများထဲမှပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါနှငျ့သငျအဖြစ်ကောင်းစွာကောင်းတစ်ဦးကိုမှန်ကန်ပိုက်ဆံဆုကြေးငွေ၏အားသာချက်ယူနိုင်ပါတယ်။ ယနေ့မိုဘိုင်းအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံတော်လှန်ရေး join နှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းရဲ့နောက်မျိုးဆက်ပျော်မွေ့!
ငါသည်ငါ့ iPhone ကို အသုံးပြု. တကပိုက်ဆံလောင်းကစားရုံဂိမ်းကစားနိုင်ပါသလား?
ဟုတ်ကဲ့ - သင်အလုပ်လုပ်တယ်တဲ့ site ကိုရှေးခယျြစဉ်အခမဲ့-to-play စဂိမ်းများကိုကစားနိုင်ပါတယ်။ ထိုအခါ slot နှစ်ခု, Blackjack, Baccarat, ကစားတဲ့, ဗီဒီယိုဖဲချပ်ဝေ, ကင်လုပ်ခိုင်းခြင်းနှင့်ကန့်သတ်နေတဲ့ကျယ်ပြန့်ပိုမိုလောင်းကစားဂိမ်းများကိုခံစားရန်အမှန်တကယ်ငွေသားဆိုဒ်များများစွာမဆိုတဦးတည်းမှ sign up ကို။
ငါသည်ငါ့ iPhone ပေါ်မှာ site တစ်ခု၏ဂိမ်းအားလုံးကစားနိုင်ပါသလား?
တချို့ကဆိုဒ်များကြောင့် Flash ကိုနှင့်အတူပြဿနာများကိုရန်သင့် Apple ကခရီးဆောင် device ကိုကထောက်ခံမည်မဟုတ်ပါ, ဒါပေမယ့် Apple ကအသုံးပြုသူများရရှိနိုင်မယ့်ဿုံကောင်းသောအဘယ်သူမျှမကို download option ကိုကအနည်းဆုံးကစားတဲ့သို့မဟုတ် 3D ဗီဒီယိုက iPhone ကို slot ကစက်တွေနဲ့တူတချို့ဂိမ်းအဘို့, များသောအားဖြင့်လည်းမရှိ။ ကာစီနိုလောင်းကစားရုံလုံးဝ HTML5 ပေါ်သို့ရွှေ့သည်အထိ - ကလှိုင်းတံပိုးကြွလာတော်ရဲ့ - ဂိမ်းတစ်ခုမရှိခြင်းကိုမျှော်လင့်။
ငါသည်ငါ့ iPhone ပေါ်မှာသိုက်စေနိုင်သလား?
ဟုတ်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းစွာအကတ်အသေးစိတျထဲမှာသင်အကြိုက်ဆုံးလောင်းကစားရုံကို iPhone အွန်လိုင်း site နှင့်လာကြတယ်ပေါ်တွင်ငွေကိုင် tab ကိုဦး။ မိုဘိုင်းလောင်းကစားရုံသိုက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကျယ်ပြန့်ပူဇော်မပါဘူးဆိုရင်, ကျနော်တို့ကအကြံပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ငါ၏အ iPhone ကိုဘေးကင်းလုံခြုံအပေါ်ကစားသလဲ?
ဟုတ်ကဲ့ - လုံးဝဘေးကင်းလုံခြုံ။ ထိပ်အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံအင်တာနက်ဘဏ်၏မာနထောင်လွှားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့စူပါလုံခြုံဆော့ဖျဝဲရှိသည်။ ရုံသငျသညျအဘယ်သူမျှမသင့်အကောင့်ကိုဝင်ရောက်နိုင်အောင်မိမိရဲ့စမတ်ဖုန်းကို set up ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလုံခြုံရေး settings ကိုရှိသေချာပါစေ။
ဟုတ်ပါတယ်။ ထိပ်တန်း iPhone ကိုအွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံအဆိုပါဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံကိုတတ်နိုင်သမျှတရားမျှတစွာသေချာပါစေ။ Apps ကပယင်းကစားတဲ့စားပွဲပေါ်မှာအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှလှည့်ဖျားအထက်-ဘုတ်အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်သေချာအောင်စာရင်းစစ်ကျပန်းနံပါတ်စစ်ဗိုလ်ချုပ်များနှင့်ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုများကိုအသုံးပြုပါ။
ဟုတ်ပါတယ်။ ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ကာစီနိုလောင်းကစားရုံ '' အွန်လိုင်းက iPhone ဂိမ်းတည်ထောင်ရန်စည်းမျဉ်းအလောင်းတွေကကြီးကြပ်လျက်ရှိသည်။ သင်သည်သင်၏အကြိုက်ဆုံးလောင်းကစား site ရဲ့ပင်မစာမျက်နှာပေါ်မှာသူတို့ထဲကအသေးစိတ်အချက်အလက်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
ငါသည်ငါ့ iPhone ပေါ်မှာဆော့ကစားမယ်ဆိုရင်ကျွန်မကြိုဆိုဆုကြေးငွေရကြလိမ့်မည်နည်း
ဟုတ်ပါတယ်။ web ပေါ်မှာလောင်းကစားခန်းမှာအစစ်အမှန်ငွေကြေးအဘို့ကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းဆုံးအရာကိုသင် sign up ကိုအခါသင်ကျန်းမာသိုက်ဆုကြေးငွေဝင်ငွေနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ apps များအားဖြင့်သင်တို့၏စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင်လောင်းကစားဒါလွယ်ကူပြီးမြန်ဆန်အထူးသဖြင့်သောအခါ - - လုံလောက်တဲ့ကစားအချိန်မှတဆင့် Play နှင့်သင်တို့သည်နောက်ကာလ၌ကောင်းတဲ့သိုက်ဆုကြေးငွေကိုလက်ခံရရှိပါလိမ့်မယ်။
0.1 ထိပ်တန်း 10 Iphone ကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း
2.1 အွန်လိုင်းကာစီနိုဂိမ်း - iPhone ကိုလမ်းသို့ပို့ဆောင်
2.2 iPhone ကိုအွန်လိုင်းကာစီနိုဂိမ်းတွင်ကစားခြင်းစေရန်ပဲ့ပြင်
2.3 iPhone ကိုကာစီနိုဂိမ်းရန်ထောက်
2.4 , ဘယ်နေရာမှာမဆိုအချိန်မရွေးကစားပွဲအတွက်နေရာ
2.5 အိုင်ဖုန်းအသေးစားများမှာ - တစ်ဦးပြဿနာဒါကလား?
2.7 ကျနော်တို့အကောင်းဆုံး iPhone ကိုကာစီနိုတွေ့ပြီးပြီ
2.8 iPhone ကိုကာစီနိုမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ